Anyị Team - Jiangxi Runquankang Biological Technology Co., Ltd.
Abụ Jiang, nwoke, amụrụ na February 1977, mba ndị China, nzere bachelọ.
2003.07, gụsịrị akwụkwọ na Jiangxi Medical College isi na biopharmaceuticals ma nweta nzere bachelọ;
2009.12-2016.10 General Manager nke Jiangxi Dongxu Chemical Technology Co., Ltd.;
2016.11-iji chee Onye isi oche nke Jiangxi Runquankang Biotechnology Co., Ltd.
Soro na ụlọ ọrụ ọgwụ na-ere ahịa maka 10 + afọ, ọkachasị na-ere ire saccharin sodium, chloramphenicol, ciprofloxacin hydrochloride, thiamphenicol, azithromycin, ciprofloxacin lactate, lincomycin, oxytetracycline, Qiangli, azithromycin, wdg. , karịsịa na ngwaahịa ndị metụtara ya dị ka heparin sodium ngwaọrụ.
Onye isi Injinia, PhD
General Manager nke Jiangxi Runquankang Biotechnology Co., Ltd.
Gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Nanchang na nzere bachelọ na injinị ọgwụ, ma tinye aka na mmepụta na njikwa maka afọ 10 +.
Onye ndoro-ndoro ochichi puku iri puku onyinye iri puku iri na ise nke Jiangxi, onye injinia okenye, PhD si South University nke teknụzụ South China, onye nnọchi anya nke anọ na nke ise Congress nke Ganzhou City Tumadi na-eme nnyocha na mmepe na itinye uzuzu uzuzu. O nwere ihe karịrị afọ iri nke ọgaranya ahụmahụ na enterprise mmepụta management. Ọ dị mma na itinye akwụkwọ maka mmemme isi obodo sayensị na teknụzụ, ikike ọgụgụ isi, nsọpụrụ na ọrụ ndị ọzọ. Eduzi ma ekere òkè na ọtụtụ ụlọ ọrụ na nkà na ụzụ mgbanwe oru, merie nke atọ na-agbata n'ọsọ nke Ganzhou Science na Technology Ọganihu Award, ikike 10+ mepụtara Ikike nchọpụta Kemịkalụ, na 50+ ịba uru nlereanya nchọpụta Kemịkalụ.
Onye nyere ikikere ogwu, gụsịrị akwụkwọ na Mahadum China Pharmaceutical.
Nka na ụzụ Director nke Jiangxi Runquankang Biotechnology Co., Ltd.
Jikọrọ na ọrụ aka na ụlọ ọrụ ọgwụ maka 10 + afọ.
Jikọrọ na njikwa mmepụta, nyocha na ule, yana njikwa njikwa na ụlọ ọrụ ọgwụ maka 10 + afọ, yana oke ọrụ ọhụụ. Emepụtara ngwaahịa ọhụrụ abụọ, swiiti na ihe ọ plantụ plantụ osisi. Ọ dị mma na nyocha anụ ahụ na nke kemịkal, nyocha nyocha, nyocha ngwa ngwa chromatography, nyocha na ịdị ọcha, yana nyocha ịdị ọcha electrophoretic. Kpamkpam mara isi technology nke heparin sodium mmepụta, na nditịm ịchịkwa mmepụta na àgwà nke ngwaahịa.